I-Apple puree (iresiphi izonikezwa ngezansi) iphuma okumnandi futhi ithenda kunoma yiziphi izinhlobo zezithelo. Ukuze uthole umkhiqizo onjalo omnandi ekheniwe, sanquma ukuthenga umkhiqizo obizwa nge-Antonovka. Kulawa ma-apula, ungenza i-puree ekhethekile, engafaneleki nje kuphela ngamaphayi, kodwa ngokusetshenziswa okuvamile netiyi eqinile.
I-apula esheshayo ye-apula: iresiphi yokulungisa isinyathelo ngesinyathelo
Izingxenye ze dessert:
Ushukela lweSand - 200 g;
Ama-apples fresh (antonovka) - 1 kg;
Ijusi lemon elivuthiwe - izinkezo ezine ezinkulu;
Amanzi ukuphuza okuvamile - izinkezo eziyi-10 ezinkulu.
Izici zokukhetha izithelo
I-Apple puree, iresiphi yayo equkethe izinhlobo ezihlukahlukene ze-"Antonovka", ingahle zilungiselelwe kokubili kokudla okuvuthiwe nokuvela kancane kancane. Into esemqoka ekwakheni i-billet enjalo yizo zonke izithelo ezithengiwe zingenazo izibungu nezinkuni.
Ukucubungula isithako esiyinhloko
Ngaphambi kokuba upheke i-apple sauce, kufanele ugeze kahle umkhiqizo ngamunye. Ukwenza lokhu, izithelo kufanele zifakwe emgodini omkhulu, zifake emanzini apholile, bese uhlanza ngokunye, usebenzisa indwangu epholile. Okulandelayo, i-apula ngayinye idinga ukuba ihlungwe kancane kancane ekhoneni nasezinhlwini. Ukushisa kwakulungiswa ngokushesha, isithelo sinconywa ukuba sibe yizicathulo ezincane bese ufakwa epanini elingaphansi kokushisa.
I-apple puree eyenziwe ekhaya eyenziwa ekhaya ingenziwa ngesitofu segesi, futhi isebenzisa ihhavini. Sinqume ukusebenzisa isicelo sokuqala, ngoba ngalo mkhiqizo uzobe ulungele ukulayisha ngemizuzu engu-50-70. Ukuze wenze lokhu, ezitsheni nama apula udinga ukuthulula ijusi lelamula elivuthiwe namanzi okuphuza, bese uthele ushukela. Emva kokuxuba izithako, kufanele zilethwe emathunjini, zivalwe ngokuqinile futhi ziphethwe i-quarter yehora (kuze kube yilapho ama-apula athambile ngokuphelele bese eqala ukwehlukana).
Inqubo yokugaya izithelo
Ngemuva kokuthi umthamo uphekwe kahle, kufanele uhlile kancane, bese ubeka u-¼ engxenyeni enhle futhi ugaye ngokucophelela, usebenzisa ukuchoboza okuvamile. Ngenxa yalokho, kufanele uthole i-purée yomoya kanye nekhekhe elibi, okudingeka ulahlwe khona.
Isigaba sokugcina ekulungiseleleni i-apple puree eyenziwe ngokwenza
I-apula puree ephuma phambili (iresiphi, njengoba ubona, ayinzima kakhulu) kufanele iphinde ibekwe epanini elingaphansi kokushisa, lilethwe ngamathumba bese lipheka imizuzu engu-5-10, kuze kube yilapho umkhiqizo uqala "ukukhukhumeza". Okulandelayo, i-gruel izithelo kufanele zishiswe-zifakwe ezindizeni zezingilazi ezinomshini futhi zihlanganiswe nezindwangu zensimbi. Ngemuva kwalokho, izitsha kufanele ziguqulwe, zimbozwe ngengubo noma ithawula le-terry futhi ligcinwe kule ndawo cishe usuku. Phakathi nalesi sikhathi, amazambane asemathinini asemathinini azophola phansi, ngemva kwalokho angasuswa esitolo esibandayo, emiphongolweni noma emiphongolweni.
I-dessert elungiselelwe ingadliwa masinyane ngosuku olulandelayo. Kumele kuqashelwe ukuthi i-puree enjalo ngeke isebenze nje njengesengezo esimangalisayo ekomitini yethishi esanda kwenziwa, kuhle futhi njengokugcwalisa okumnandi kwamapayipi avulekile, amapayipi kanye neminye imikhiqizo eyenziwe ekhaya.
Petersburg zamakhosi - amagugu yezakhiwo. Yini babe izigodlo Petersburg?
Umlingisikazi Dzheymi Myurrey: Biography, izithombe. movie aphezulu